August 18, 2019 - khitalinmedia
ဆိုင်ကယ်ရပ်ခိုင်းတာကို မရပ်တဲ့အတွက် ကျေးရွာသားတစ်ဦး သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ခံရ
August 18, 2019 Khitalin Media 0
ဆိုင်ကယ်ရပ်ခိုင်းတာကို မရပ်တဲ့အတွက် ကျေးရွာသားတစ်ဦး သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ခံရ၊ ညာခြေသလုံးနဲ့ ဘယ်လက်မှာ ဒဏ်ရာရရှိ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မိုင်းယုလေးကျေးရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ အိုက်ယွန်းဆိုသူ ဒေသခံတစ်ဦး မြင်းခွာရွက်ရှာပြီး အိမ်ပြန်အလာ နမ့်ခိုက်တံတားအနားအရောက် တပ်မတော်သားတွေက ရပ်ခိုင်းပေမဲ့ မရပ်တဲ့အတွက် သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ညာခြေသလုံးနဲ့ ဘယ်လက်ကို ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ […]
မြန်မာ့ ရိုးရာ လက်ဆန်း နည်းလေးပါ။မိန်းခလေးတွေ အတွက် သီးသန့်ပါ အရွယ်ရောက်တဲ့မိန်းခလေး တွေက အစ အရွယ်လွန် အပျိုကြီးတွေ …တခါတရံ တခုလပ် အိမ်ထောင်ပျက်အစရှိတဲ့ အမျိုးသမီး တွေမှာချစ်စကား ကမ်းလှမ်း ခံရတာ မေတ္တာ ရှိကြောင်းပြောလာတာ၊ လက်ထပ်ခွင့် ပန်လာ တာတွေရှိပါလိမ့်မယ်။ ရင်ခုန်ရတာ တဖက်၊ […]
ကျဆုံးခဲ့တဲ့ တပ်မတော်သားတို့ရဲ့ မိသားစုတွေကို အားပေးလှူဒါန်းမယ်ဆို တဲ့ ရွှေအိမ်စည်
ပြင်​ဦးလွင်​နဲ့ ရှမ်းပြည်​နယ်​​မြောက်​ပိုင်း​ဒေသ​တွေမှာ တပ်​မ​တော်​နဲ့ လက်​နက်​ကိုင်​တပ်​ဖွဲ့​တွေ အပြန်​အလှန်​တိုက်​ပွဲ​တွေဖြစ်​​ပွား နေကြသလို ဒီ​နေ့မှာလဲ လာရှိုးမြို့ နမ့်တွန်းကျေးရွာ အနီး တိုက်ပွဲ တွင် တပ်မတော်က ရဟတ်ယာဉ်များ စတင်​အသုံးပြု တိုက်ခိုက်​​နေတယ်​လ်ို့ သိရပါတယ်။ အခု ရက်ပိုင်းအတွင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် တပ်မတော်က ကျဆုံး (၉) ဦး၊ ဒဏ်ရာရ […]
ဗိုလ်မှူး ပြည့်ဖြိုးအောင် နမ့်ဖတ်ကာ တွင် ကျဆုံး လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်.. မိသားစု နဲ့ထပ်တူ ဝမ်းနည်း ရပါတယ်
ဗိုလ်မှူးပြည့်ဖြိုးအောင် နမ့်ဖတ်ကာ တွင် ကျဆုံး လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်.. မိသားစု နဲ့ထပ်တူ ဝမ်းနည်း ရပါတယ်။ဗိုလ်မှူးပြည့်ဖြိုးအောင် နမ့်ဖတ်ကာ တွင် ကျဆုံး လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်.. မိသားစု နဲ့ထပ်တူ ဝမ်းနည်း ရပါတယ်။ဗိုလ်မှူးပြည့်ဖြိုးအောင် နမ့်ဖတ်ကာ တွင် ကျဆုံး လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်.. မိသားစု နဲ့ထပ်တူ ဝမ်းနည်း ရပါတယ်။ […]
၈လပိုင်း ၂၀ ရက်မှ ၃၀ ရက်အတွင်း မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်နိုင်
ဩဂုတ်လ တတိယ ၁၀ ရက်ပတ်အတွက် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်အရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ၁ ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး ပိုမိုအားကောင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ မိုးဇလက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အနောက်တောင် မုတ်သုံလေကတော့ အားအသင့်အတင့်မှ အားကောင်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေကတော့ စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ ကချင်၊ ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ ရွာသွန်းမြဲထက်ပိုနိုင်ပြီး နေပြည်တော်၊ […]
ကမ်းခြေမှာ မိန်းကလေးတစ်ဦး မုဒိန်းကျင့်ခံနေရတာ မြင်ပေမယ့် မကူပဲ သူပါဝင်ရောက် မုဒိန်းကျင့်ခဲ့
မိန်းကလေးတယောက်အနှိပ်စက်ခံရကာ​ မုဒိမ်းအကျင့်ခ့ရတာကိုတွေ့နေရက်နဲ့​ မကယ်ဆယ်ပဲသူပါမုဒိမ်းဝိုင်းကျင့်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား ကမ်းခြေတစ်ခုမှာအနားယူနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို​ အမျိုးသားတစ်ယောက်ကနှိပ်စက်အနိုင်ကျင့်နေတာကိုတွေ့နေရပေမယ့်​ အခြားအမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ​ မုဒိမ်းကျင့်နေတာကိုပါဝင်ကာသူပါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်ကို​ မုဒိမ်းထပ်ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ အသက်​ ၂၀ အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဂျာမန်အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ဟာကမ်းခြေတစ်ခုကိုအပန်းဖြေခရီးထွက်လာခဲ့ရာနေ​ ဂျာမန်အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့လိင်မှုစော်ကားခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ထက်ပိုဆိုးတာကတော့​ သူမလိင်မှုစော်ကားခံနေရတဲ့အချိန်မှာ​ နောက်ထပ်သူစိမ်းတစ်ယောက်ပါရုတ်တရက်ရောက်လာပြီး.သူမကိုကယ်ရမဲ့အစား​ မုဒိမ်းထပ်ကျင့်ခဲ့တာပါ။ ကံကောင်းသွားတာတစ်ခုကတော့​ သူမဟာ​ သူမကိုလိင်မှုစော်ကားနေတဲ့သူ၂ယောက်ရဲ့အလစ်မှာရုန်းကန်ကာ​ပြေးထွက်လာခဲ့ပြီး.အကူအညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ​ ကိုယ်တစ်ပိုင်းမှာအဝတ်မပါနဲ့​ ကမ်းခြေရဲ့လူသူရှိတာနေရာကိုပြေးထွက်ကာအကူအညီတောင်းခံခဲ့တဲ့အချိန်မှာ​ ရေကန်အသင့်ကြာအသင့်ဆိုသလိုပဲ​ ကမ်းခြေမှာလာအနားယူတဲ့ခရီးသွားတွေဆီက​ လုယက်တဲ့ခါးပိုက်နှိုက်တွေကိုဖမ်းဖို့ထွက်လာတဲ့ရဲတွေနဲ့​ […]
ရေဘေးသင့် အိမ်ထောင် (၉၂)စုအတွက် (၅)သောင်းကျပ် စီ ထောက်ပံ့ ခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်း
မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်း မွန်ပြည်နယ် ရေဘေး ဒုက္ခကြောင့် လူပေါင်းသောင်း နဲ့ချီပြီး အိုးအိမ်ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပရဟိတအသင်းတွေကလည်း ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေ အင်တိုက် အားတိုက် ပြုလုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားကြီး ဝေဠုကျော် ရဲ့ ဝေဠုကျော် လူမှုကယ်ဆယ်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်း မှလည်း ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် […]
အိပ်မက်ကလေးပဲ ဖြစ်မယ် မောင်
တမလွန်ဆိုတာ မိုးရွာလေ့ ရှိသလား မောင် အချိန်တိုတိုလေးမှာပဲမောင့်ရဲ့ ဝင်သက်ထွက်သက်ကလေးလည်း တိုသွားတယ်….ဘယ်လိုဘုရားသခင်မျိုးရဲ့လက်နဲ့မှ စစ်ပွဲတွေကို သတ်လို့ရမလဲ အိပ်မက်ကလေးလည်း ဖြစ်မယ် မောင်အိပ်မက်ဆိုတာလည်း အိမ်ထဲမှာပဲ ရှိလိမ့်မယ်။ မောင် မမြင်ဖူးတဲ့ သားလေးကမောင့်ကိုလည်း မြင်ဖူးမှာ မဟုတ်ဘူး ဒါမင်းဖေဖေလို့ ဓာတ်ပုံကလေးပြမိတဲ့ခါကလေးပြန်ပြောမယ့် စကားတွေကကျွန်မအတွက် အလျော်အစားလည်း ကြီးနိုင်တယ် မောင် […]
ကံသီ​ပေလို့သာ​ပေါ့……..? ကျွန်​​တော်​မ​နေ့ညက (၁၆) နှစ်​အရွယ်​မိန်းခ​လေးတစ်​ဦး ဘဝကိုကယ်​တင်​လိုက်​တယ်။ (မှတ်​ချက်​) ဒီပို့စ်​ကိုတင်​ချင်းသည်​နာမည်​ကြီးချင်​လို့မဟုတ်​, သူရဲ​ကောင်းဖြစ်​ချင်​လို့မဟုတ် ကာယကံရှင်​ရဲ့ခွင့်​ပြုချက်​ဖြင့်​ ​နောက်​ထပ်​ ဒီလိုအရွယ်​မိန်းခ​လေးများအမှားမဖြစ်​​အောင်​ သင်​ခန်းစာယူရန်​တင်​ပြခြင်းဖြစ်​ပါသည်။ (16,8,19)ရက်​​နေ့အချိန်​ကည (10)နာရီဝန်​ကျင်​ကျွန်​​တော်​အလုပ်​ကိစ္စဖြင့်​အပြင်​ကပြန်​လာချိန်​သာ​ကေတုမြို့နယ်​ (7)​ဈေးလမ်းဆုံ ကားမှတ်​တိုင်​တွင်​ (၁၆)နှစ်​အရွယ်​မိန်းခ​လေးတစိ​ယောက်​ငိုရှိုက်​​နေသည်။ လက်​ထဲမှာထမင်းချိုင့်​အ​သေးတစ်​လုံး , ​နောက်​မှာ​ကျောပိုးအိတ်​တစ်​လုံးလွယ်​ထားသည်​။ သူ့အနားမှာ​ အမူးသမားနှစ်​ဦး စည်းရုံး​ပြီးသူမကို ​ခေါ်​နေသည်။ ညနက်​​တော့ကားမှတ်​တိုင်​ကလည်းလူပျက်​ […]
ယနေ့ကြုံတွေခဲ့ရသောမြင်ကွင်းက စိတ်မခိုင်လျှင် မျက်ရည်ကျမိမည်
ကျွန်တော်တာဝန်ကျရာကျောင်းသည် တပ်မိသားစုဝင်များ၏ကလေးတွေအများစုတက်သောကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ယနေ့ကြုံတွေခဲ့ရသောမြင်ကွင်းက စိတ်မခိုင်လျှင် မျက်ရည်ကျမိမည်။ ဖခင်များမှာရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ထွက်ခွာမည်ဖြစ်သောကြောင့် ကျောင်းသို့သူတို့၏ သားသမီးကလေးများအား လာရောက်နှုတ်ဆက်ကြရာ ကျွန်တော့်၏ G3ကလေး မိဘ ၃ /၄ဦးခန့်လာကြသည်။ “သမီးစာကြိုးစားနော်/သားစာကြိုးစားနော်/လိမ်လိမ်မာမာနေနော်/ဆရာ့စကား/ဆရာမစကားနားထောင်နော်/ဖေကြီးပြန်လာမှာတဲ့” သားဖြစ်သူသမီးဖြစ်သူလေးများမှရှေ့တန်းထွက် စစ်ယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံနဲ့ သူတို့၏ဖခင်ကိုဖက်၍ ငိုကြသည်။ကျွန်တော်G3အတန်းပိုင်ဆရာဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်း မျက်ရည်ဝဲဆို့နစ်ကြွေကွဲရပါဘီလေ။ ဆရာဆိုတော့ဟန်လုပ်ရင်း “သားတို့သမီးတို့ရယ်ဆရာတစ်ယောက်လုံးရှိသေးတာ ဘာအားငယ်စရာလိုလဲ။သားတို့သမီးတို့ရဲ့ဖေကြီးပြန်လာရင် ဆရာပါလိုက်ကြိုပေးမှာ။ ဆရာတစ်ယောက်လုံးရှိသေးတယ်ဘာမှအားမငယ်နဲ့သမီးလေးသားလေးတို့ရယ်။”လို့အားပေးမိခဲ့ပါတယ်ဗျာ….။KG/G1/G2/G3/G-5ကလေးများသည် အသိအမြင်ရှိနေကြဘီလေ။ […]
အခုပဲ ဖုန်းကိုအောက်ချပြီး သင့်လက်ဖဝါးကို ဖြန့်ပီး ကြည့်လိုက်ပါ ….. အရမ်းမှန်တယ်နော်
မနက်က ရန်ကုန်မြစ်ထဲ သင်္ဘောပေါ်မှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရေထဲပြုတ်ကျခဲ့ရာ အမြင့်ကနေခုန်ချပီး ကယ်ဆယ်သူရဲ့ အသက်ကို သိလိုက်ရသောအခါ…
မြိုသိပျလို့မရအောငျ ပေါကျကှဲသှားတဲ့ နေ့ ကတော့ နဂါးတဈကောငျလို ဖွဈသှားတတျတဲ့ စနေ
“မောင်လေး”မမ ဂါဝန် လေးချွတ်ပေးပါ…
အချစ်ကြီးသလို သစ္စာလဲအရမ်းကြီး တဲ့ တနင်္ဂနွေ
KHITALINMEDIA provide celebrity, life style, breaking news, local news and international news. Articles are displayed in text, video and photos. Visitors can read news in articles type of categories in https://khitalinmedia.com/ (example – News, Entertainment, Sport, Health, Celebrities, Media & Music….etc). Hope our visitors enjoy our website.